Shirkada Genel Energy oo bartilmaameedsaneysa in 2 Bilyan oo Barmiil oo Saliid ah Ka hesho Somaliland – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Shirkada Genel Energy oo bartilmaameedsaneysa in 2 Bilyan oo Barmiil oo...
Shirkada Genel Energy oo bartilmaameedsaneysa in 2 Bilyan oo Barmiil oo Saliid ah Ka hesho Somaliland
Shirkadda Genel, oo ah shirkadda shidaal ka baadhaysa Somaliland ayaa bartilmaameedsaneysa inay hesho laba bilyan oo foosto.
Bishii Agoosto 2012, Genel waxaa la siiyay ruqsad sahaminta sahaminta dhinaca xeebta ah ee SL-10-B iyo SL-13 oo ku yaal Somaliland, iyadoo 75% ay ka shaqeeyaan labadaas arrimood.
Genel wuxuu sii dheereeyay jiritaankiisa bishii Nofembar 2012 isagoo helay 50% xiisaha kaqeybgalka heshiiskii wax soosaarka Odewayne kaas oo daboolaya meelaha loo yaqaan ‘SL-6, SL-7, SL-10A.
Dusha sare ee dhinaca Somaliland waa gobol aan wali macdantiisa lasoo saarin oo qeyrin, oo ay yar tahay ceelal shidaal qodis. Cabbirka guud ee dhufeysyada ayaa qiyaastii u dhigma Gobolka Kurdistan ee Ciraaq oo dhan.
Bishii Marso ee sanadkii hore, Madaxa Fulinta Guud ee Genel Murat Ozgul ayaa ku dhawaaqay in shirkaddu laga yaabo inay shidaal ka bilowdo Somaliland sannadka dambe.
Muddo dheer, runtii waan jeclahay [sahammada] sahaminta Somaliland. Waxay i siineysaa dareenka Kurdistan 15 sano ka hor, ”Ozgul ayaa sidaas yidhi. “Sanadka 2019 waxaan noqon karnaa [bilaabi] howsha qoditaan,”
Tarjumida xogta 2D ee seismic data oo ay weheliso sii wadida falanqaynta gunta ayaa sababay kororka rajada waxayna horseedaysaa soosaarida alaabada SL10B13 (Genel 75% xiisaha shaqada iyo howl wadeenka) kaas oo cadeynaya aragtida fog ee ay leedahay in dhismuhu leeyahay awood la taaban karo.
Dhowr bartilmaameed oo sahamin sahamin ah ayaa lagu cadeeyay noocyada hawsha inay si toos ah is barbar dhigaan saqafyada sare ee Yemen.
Mar haddii rajooyinkaas iyo hogaamiyayaasheeda la isku waafaqay marka la eego awooda iyo awooda halista juqraafiyeed ee la xiriira Shirkadda waxay bilaabi doontaa olole looga baxo beerta, oo bilaabmaysa dhamaadka Q3 2019.
Tani waxay la jaanqaadeysaa qaabkii loo qoondeeyay raasamaalka shirkada, maaddaama ay muddo dheer keydinayso kheyraadka sahaminta shidaalka ee Afrika lagu bartilmaameedsanayo iyada oo ah tan ugu hooseysa ee suuragalka ah.
Dhismaha Odewayne wuxuu sii wadayaa sii jiritaanka dhul gariirka si loo dhammeeyo fahamka Shirkadda ee ku saabsan mustaqbalka. Labada xaaladoodba, ballanqaadyada shaqada ugu yar iyo kharashaadka la xiriira ee muddada shattiga hadda la buuxiyay.
Bishii la soo dhaafay, Genel wuxuu ku dhawaaqay inuu iibsaday lammaanehiisa shirkadda ‘SL10B13 block’, oo ku taal dhinaca dhinaca Somaliland.
Shirkaddu waxay heshay saami dhan 25% Bariga Afrika oo ah saamiga aan la shaacin.
waxaan ka soo xiganey warbixintan website horndiplomat halkan hoose ka akhriso yadoo ingiriis ah
Genel Energy Targets 2 Billion Barrels Of Oil In Somaliland Exploration
Hogaamiyeyaasha Khaatumo oo sheegay in ay diyaar u yihiin dhamaystirka Heshiiskii dhex maray Dawladda Somaliland
Kenya oo wali aan ku guuleysan kursiga UN ee u dhaxeeyey...